Bixitaanka Askarta Mareykanka ee Soomaaliya oo fursad u
Sida uu daabacay Wargeyska Foreign Policy, tallaabada Hogaamiyaha xilka ka degaya Mareykanka ee Donald Trump uu Soomaaliya ugu saarayo Ciidamada ka jooga waxa ay fursad u noqon kartaa Shiinaha & Ruushka oo tartan dhanka Militariga & ganacsiga uu ka dhaxeeyo.
Waxaa la fahamsan yahay in tallaabada Trump ay ku beegan tahay maalmo kahor xil wareejinta oo ah bartamaha Janaayo 2021-ka, waxa uu ku saarayaa Ciidamo u dhaxeeya 650 ilaa 800 oo Askari oo Soomaaliya u jooga caawinta Ciidamada DFS & kuwa AMISOM.
Balse Mareykanka ayaa ku adkeystay in ay baaqi kusii ahaanayaan Ciidamadiisa dalalka deriska la ah Soomaaliya ee Jabuuti & Kenya si uu xaaladda kor kala socda, inkasta oo Xukuumadda Nairobi uu weystay in uu ka fulin karo weerarada Duqeynta ah.
Ruushka ayaa mar damcay in uu saldhig military ka dhigto Magaalo Xeebeedka Berbera ee Gobaladda Waqooyi, sababtu in Dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan ay la leedahay Xukuumadda Washington, iska markaana uu daneynaya in uu ka muuqdo Geeska Afrika.
Hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uusoo baxay go’aanka Donald Trump ee la bixista Askartiisa durba ka falceliyay, waxa uu dalbaday in Xukuumadda Washington aysan ku degdegin saritaanka Ameerikaanka Jooga Dalka.
Isha: Foreign Policy / Axadle.